मनाेरञ्जन – PenNepal
अनिल कपुरका छोरामाथि तापसीको कडा प्रहार
एजेन्सी । नायिका तापसी पन्नु एकपछि अर्को चलचित्रको सफलताले दंग छिन् । बलिउडमा कथा विक्न थालेपछि उनी अहिले राम्रो कथा भएका चलचित्र छानिरहेकी छिन् । उनै, तापसी हालै मात्र नेहा धुपियाले संचलन गरिरहेको शोमा पुगिन् । उनलाई नेहाले प्रश्न गरिन्–‘त्यो कुन कलाकार होलान्, जसको बाबु–आमा चर्चित नभएको भए उनले चलचित्रमा काम पाउने थिएनन् ।’ नेहाको […]
‘लभ यू हमेशा’मा सुरज र ऋचाको रोमान्स (भिडियो)
काठमाडौं । ‘लभ यू हमेशा’ मंसिर १३ बाट देशभर प्रदर्शनमा आउने फिल्म हो । फिल्मको प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा निर्माण युनिटले यसको प्रचार समेत आक्रमक बनाएको छ । प्रचारकै क्रममा ‘लभ यू हमेशा’ को रोमान्टिम गीत ‘यो हावा किन चल्छ’ सार्वजनिक भएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गीतमा फिल्मका मुख्य कलाकार […]
‘चपली हाइट ३’ मुर्हूत, विनिताको ठाउँमा स्वस्तिमा
काठमाडौं । सुपरहिट फिल्म ‘चपली हाइट’को दोस्रो सिक्वेल ‘चपली हाइट ३’ निर्माण हुने भएको छ । मंगलबार काठमाडौंको बुङमतिस्थित कार्य विनायक मन्दिरमा फिल्मको मुर्हूत गरिएको छ । स्क्रिप्ट, क्ल्याप र क्यामेरा पूजा गरेर गरिएको मुर्हूतमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, सुपुष्पा भट्ट, अभिनेता आमिर गौतम, महेश त्रिपाठी, प्रतिक श्रेष्ठ, निर्माता अर्जुनकुमार, निर्देशक निकेश खड्का लगायतको उपस्थिति रहेको […]
श्रृष्टि श्रेष्ठको आइटम डान्स यस्तो (भिडियो)
काठमाडौं । पूर्वमिस नेपाल तथा अभिनेत्री श्रृष्टि श्रेष्ठ पनि आइटमा देखिएकी छन् । उनले फिल्म ‘माछा माछा’ को गीत ‘म्याडम म्याडम’ मा आइटम नृत्य गरेकी हुन् । गीतमा श्रृष्टिसँग अभिनेता सौगात मल्लले समेत ठुम्का लगाएका छन् । यी दुवैका अलवा गीतमा विजय बराल र अनोज पाण्डे पनि देखिएका छन् । गीतका गायक तथा संगीतकार अनुपम […]
कमल र सुजाताको ओई काली सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक कमल थापा र सुजाता विकको पहिलो गीत ओई कालीको म्युजिक भिडियो शुक्रबार सार्वजानिक भएको छ। वविता विकको शब्द संगीतमा सुजाता संगै कमलको स्वर,अभिनय र नृत्य देख्न सकिन्छ। निरोज लामाको संगीत तथा संगीत संयोजनमा बनेको ओई कालीको अडियो र भिडियो उत्तिकै उत्कृष्ट बनेको छ। सुरज इन्टरटेन्टमेन्टको निर्माणमा बनेको म्युजिक भिडियोलाई सुरज खनालले छायांकन […]
शिल्पालाई प्रकाउ नगर्ने आन्तरिम आदेश खारेज
काठमाडौं । चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको विवादमा नयाँ ट्विस्ट तब आयो, जब छवि ओझाको जेठी श्रीमती हेमाकुमारी ओझाले यी दुईविरुद्ध बहु–विवाहको मुद्दा हालिन् । उक्त मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला अदालतले छवि(शिल्पालाई छानविनको लागि पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नायिका शिल्पा पोखरेलले आफूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन […]
‘पती पत्नी और वो’ को ट्रेलरमा किन तेर्सिदैछन् प्रश्न ? (हेर्नुहोस् ट्रेलर)
एजेन्सी । श्रीमान्–श्रीमती र उनीहरुको जीवनमा कुनै तेस्रो व्यक्तिको इन्ट्रिबारे बलिउडमा थुप्रै फिल्म बनेका छन् । यो एउटा यस्तो विषय हो जसलाई मानिसहरुले पर्दामा हेर्न रुचाउने बताइन्छ । यसै मसलाले भरिपूर्ण अर्को एउटा फिल्म बलिउडमा रिलिजको तयारीमा छ । फिल्मको नाम हो – ‘पति, पत्नी और वो’ । यो फिल्म सन् १९७८ मा यसै नामबाट […]
एजेन्सी । चलचित्र ‘पति, पत्नी और ओ’को ट्रेलर सोमबार सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रमा नायक कार्तिक आर्यनको साथमा नायिकाद्धय भूमी पेन्डेकर र अनन्या पाण्डेको मुख्य भूमिका छ । चलचित्रको ट्रेलरमा ‘सेक्स’ सम्बन्धी बिषयवस्तु उठाइएको छ । यसैले, चलचित्रको कथावस्तु के हो भन्ने खालको प्रश्न पनि दर्शकले उठाएका छन् । यो बिषयमा नायिका भूमी भन्छिन्–‘जब मैले […]
सलमानले सुरु गरे ‘राधे’को छायांकन
एजेन्सी । नायक सलमान खान अहिले चलचित्र ‘दबंग ३’को प्रचारमा व्यस्त छन् । चलचित्रको प्रचार अगाडि बढिरहेको समयमा सलमानले सन् २०२० को इदमा रिलिज हुने भनिएको चलचित्र ‘राधे’को छायांकन सुरु गरेका छन् । सलमान आफैले सामाजिक संजालबाट चलचित्रको छायांकन सुरु भएको खुलाएका छन् । यो चलचित्रलाई प्रभु देवाले निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्रमा सलमानको साथमा नायिका […]
सुपरफ्लप भएको ‘जिरो’ फिल्म किन अचानक टप ट्रेन्डमा ?
एजेन्सी । बलिउडका किंग खानका नामबाट चर्चित शाहरुख खानको गत वर्ष रिलिज भएको जिरोको ट्रेलर आज बारम्बार हेरिँदैछ । बक्स अफिसमा सुपरफ्लप भएको यो फिल्मकोे आज भारतीय सोसल मिडियामा अत्यधिक चर्चा भइरहेको छ । तर यो ट्रेन्डमा आउनुको कारण निकै रोचक छ । जिरोको ट्रेलर शाहरुख खानको एउटा ट्वीटपछि ट्रेन्डमा आएको हो । यो ट्वीटमा […]